[Ukara] Wondershare MobileTrans: 1-pịa na ekwentị ekwentị Nyefee Ngwá Ọrụ
Newly akwado iPhone 6s (Plus), WinPhone8 & 8.1 ndabere ka
iOS / Android. Ofụri Esịt dakọtara na Windows 10, iOS 9, na Android 6.0
Gbalịa Ọ Free Ohere 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP Buy Ugbu a
Ma ị na-upgrading ntị (Atụmatụ: Olee otú ka ịgbanwee igwe n'enweghị), ịmafe a dị iche iche ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe na-ebu ngwaọrụ, naanị ụfọdụ ekwentị ụlọ ọrụ pụrụ inyere gị aka nyefee kọntaktị - ma ihe banyere ihe ọ bụla ọzọ? Wondershare MobileTrans-Eme ka ọ nnọọ mfe n'ihi na ị na ewere ihe niile, gụnyere kọntaktị, foto, ederede ozi, music, kalenda, video, ngwa ọdịnala na oku na ndekọ, ya na ị na 1 Pịa. Ọ dị mma na n'ihe ize ndụ-free, na ọdịnaya niile ọ Nyefe bụ 100% otu ihe ahụ dị mbụ otu.
Bufee ọdịnaya n'etiti iOS, Android, WinPhone na Nokia Symbian
Ọ dịghị nke ọma na-ebufe ọdịnaya n'etiti ekwentị mkpanaaka na-agba ọsọ iOS, Android (Ofụri Esịt akwado Android 6.0 Marshmallow), WinPhone na Nokia Symbian. E wezụga, mgbe ebufe kọntaktị (atụ: otú nyefee kọntaktị site na Samsung ka iPhone), ọ bụghị nanị Nyefe aha na nọmba, ma na-akpali ọrụ aha, adreesị ozi-e, ụlọ ọrụ aha, na ndị ọzọ.
Ndabere ekwentị Data na Weghachi na Lossless Ogo
Na nkwado ma weghachite oge na-aga
Dị nnọọ nwere otu ekwentị na n'aka gị? Ọ dịghị mkpa. Ị nwere ike ndabere ekwentị gị na PC ahụ na mbụ weghachi ndị ọzọ ọ bụla na-akwado ekwentị mgbe ọ bụla ị chọrọ.
Na-ekwentị Data nwetara
Ị nwere ike mfe ndabere data gị iPhone / iPad / iPod aka, Android ekwentị, WinPhone ma ọ bụ Nokia (Symbian) ekwentị gaa na PC, edebe ihe niile dị mkpa data mma ma chekwaa ya.
Weghachite ekwentị Ndabere maka iPhone / akporo ekwentị
Okporo mmiri gị ochie ekwentị maka iPhone ma ọ bụ Android ekwentị? Ugbu a, a mobile transfer-ahapụ gị weghachite backups kere site iCloud, iTunes, Samsung Kies (3) na BlackBerry® Desktọpụ Suite, na nyefe kọntaktị, ozi, wdg ka iPhone na Android ekwentị.
Nyefee iTunes ọ bụla akwado Ngwaọrụ
Ị nwere ike weghachite iTunes nkwado ndabere na mpaghara transfer kọntaktị, ozi ederede, photos, video, wdg ọ bụla na-akwado ngwaọrụ mkpanaaka.
Ị nwere ike weghachite data si iCloud ndabere ka ọ bụla na-akwado Android ekwentị, transfer kọntaktị, ederede ozi, photos, videos, kalenda na ndị ọzọ.
Ọ arụ ọrụ zuru okè na Apple, Samsung, Nokia, HTC, LG, Sony, Google, Huawei, Motorola, ZTE, na ndị ọzọ mobile ụdị. Ọzọkwa, ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na isi na enye: AT & T, Verizon, Sprint na T-Mobile.
The table n'okpuru ga-emelitere on mgbe ọhụrụ igwe na-wepụtara.
Samsung Cheta 4,
Samsung Cheta 3,
Samsung Cheta 2,
Samsung Cheta, Samsung S,
iPad ikuku, iPad Obere 2,
iPod aka 5,
iPod emetụ 4.
Nokia N97 Obere, Nokia E61I,
Nokia 6790 anya, Nokia E72,
Na-adịgide adịgide Ihichapu Your Old ekwentị
Kpebie na-ere ma ọ bụ inye gị ochie Android ekwentị, ma chọrọ ịnọgide na gị onwe onye data nke ọjọọ aka? Wondershare MobileTrans Enyere iji chebe gị onye data site erasing ha niile si gị ochie Android ekwentị, n'enweghị nsogbu na-adịgide adịgide.
Ihichapu Your Old ekwentị: Hichapụ anya ihe niile na gị Android ekwentị na 1 Pịa.
Ekwentị Nyefee: ndabere gị iPhone na kọmputa
Ekwentị Nyefee: Weghachi ekwentị gị site na a ndabere faịlụ
Ekwentị Nyefee: Nyefee music si iTunes ọ bụla na-akwado ekwentị
Ekwentị Nyefee: Ihichapu ihe niile si gị iPhone
Ekwentị Nyefee: Detuo kọntaktị, music, video, foto na SMS si iPhone ka Android ekwentị
Ekwentị Nyefee: Nyefee kọntaktị, SMS, music, video na foto site na Android ekwentị iPhone
Ekwentị Nyefee: Paghaa kọntaktị, foto, SMS, music, video, ngwa ọdịnala na oku na ndekọ si gam akporo ka Android na nke a Android transfer ngwá ọrụ
Ekwentị Nyefee: Paghaa SMS, kọntaktị, music, video na foto site Nokia ekwentị Android ekwentị
Ekwentị Nyefee: Nyefee photos, kọntaktị, music na video si iPhone ka iPad
Ekwentị Nyefee: Detuo kọntaktị, foto, music, SMS na video si Nokia ka iPhone
Ekwentị Nyefee: Detuo kọntaktị SMS si gam akporo ka Nokia ekwentị
Ekwentị Nyefee: Bugharịa kọntaktị site na iPhone ka Nokia ekwentị
Ekwentị Nyefee: Gbanye kọntaktị site na otu Nokia ekwentị ọzọ
Nyocha ahịa anyị Na MobileTrans - na ị ga-, Oke
Ihe dị egwu APP
M a na-achọ nile internet na egwu ụbụrụ m na otú m ike ịnyefe data si m Sony Xperia Z3 m Iphone 5s na ala ma, le m na-asụ ngọngọ n'ime a dị oke egwu ngwa. N'ezie mfe iji ...
Rob n'ógbè nlekọta ọrụ
Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na ngwaọrụ ada ada jikọọ na ngwaahịa?
Esi ọkwọ ụgbọala nke Android ngwaọrụ.